चर्को आलोचना पछि पछि हट्यो सरकार ! नेपालमा नहुने भयो आईफा अवार्ड – Nepal Trending
चर्को आलोचना पछि पछि हट्यो सरकार ! नेपालमा नहुने भयो आईफा अवार्ड
काठमाडौं । निकै विवादित बनेको इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आईफा) नेपालमा नहुने भएको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धनसमेत गर्ने उद्देश्यले गर्न खोजेको कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
आईफा अवार्ड समारोहको संयोजन गरिरहेको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले आईफा अवार्ड नेपालमा नहुने पक्का–पक्की भएको र त्यसको घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको बताएका हुन् ।
यसको आधिकारिक निर्णय भने बैठक बसेर गरिने उनले बताए । अवार्डबारे थप निर्णय भने पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । जोशीले संसदीय समितिले नै अवार्ड नगर्न निर्देशन दिईसकेकोले आईफा अवार्ड नेपालमा नहुने स्पष्ट पारे । असार ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आईफा नेपालमा गर्ने र त्यसको सबै आर्थिक भार सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भयो ।
इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) रद्ध भएकोमा कलाकार दिपकराज गिरीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले रद्ध गर्न निर्देशन दिएसँगै अवार्ड नहुने निश्चित भएको छ। अवार्ड नै नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि हास्य कलाकार गिरीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आइफा रद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै गिरीले पैसा मात्रै बचाएर केही नहुने उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड र आयोजक संस्था ह्वीजक्राफ्ट इन्टरनेशनल इन्टरटेनमेन्टबीच सहमतिमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको थियो। अवार्ड समारोहमा विभिन्न देशका ६ सय प्रतिनिधि नेपाल आउने, ६० भन्दा बढी बलिउडका प्रख्यात कलाकार सहभागी हुनेलगायतको सहमति भएको थियो।